म तुरुन्तै ओलीको लागि धरहराबाट हाम फाल्न तयार छु’
महेश बस्नेत, पूर्व मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जुझारु युवा नेता । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता राजनीति वृतमा कुनै । न कुनै कोणबाट चर्चा भइरन्छ बस्नेतको । उभार अवस्थाको माओवादीले २०६६
सालको अन्त्यतिर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्घोषसहित काठमाडौं । उपत्यकामा गरेको विशाल प्रदर्शन तितरबितर पार्न बस्नेतको स्मरणीय भूमिका रह्यो । त्यसले बस्नेतको राजनीतिक हैसियत समेत बढायो । नेकपा एमालेको ९ औं
महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन पनि बस्नेतको सक्रियता रह्यो । ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन खेलेको भूमिकाकै कारण २०७० साल मंसिर ४ गते भएको । संविधानसभाको द्राेसाे निर्वाचनमा पराजित भए पनि
बस्नेतलाई मन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो । मन्त्री बनेपछि भने बस्नेतको चर्चा क्रमश ओसिँदै गयो । राजनीति वृतमा अहिले फेरि बस्नेतको चर्चा भइहेको छ ।
समाजवादी पार्टी । र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले
बस्नेतलाई सांसदअपहरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । बस्नेत तथा नेकपाका अर्को सांंसद किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि नवगति जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र । यादवसहितका केही सांसदलाई
पार्टी फुटाउनको होटलमा थुनेर राखेको आरोप लागेको छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र त्यो घटनाले नेकपामा अहिले । ठूलै भुमरी ल्याएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने ।
आवाज समेत उठिरहेको छ । किन ल्याइयो अध्यादेश ? के थियो त्यसको उदेश्य । के सांसदहरुलाई अपहरण गरिएकै हो ? अब प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्र कमजोर भएकै हो त ?